Friday, 09 February 2018 23:54
Friday, 09 February 2018 23:52
Friday, 09 February 2018 23:44
Ijaarsi istaadiyeemii Wallaggaa caalaatti aarifachuu qaba jedhame
Finfinnee: Ji'oottan lamaan darban jijjiiramni jiraatus ijaarsi istaadiyeemii Wallaggaa caalaatti harkifachuu akka qabu Biiroon Dhimma Dargaggoof Ispoortii Oromiyaa beeksise.
Jilli Hogganaa biirichaan hogganamu tibbana istaadiyeemicha daawwateera. Hogganaan biirichaa Obbo Mootummaa Tamasgeen akka jedhanitti, harkifannaa ijaarsa irraan kan ka'ee hawaasni naannoo Oromiyaa yeroo adda addaa gaaffii kaasaa tureera.
Jiillichi daawwannaa istaadiyeemii erga gaggeessee booda jijjirama ji'a lammaan darban madaalanii jiru. Bu'uuruma kanaan jijjiramni ji'oota lammaan darban jiru gaarii yoo ta'ees, guyyaa jedhamee keessatti ijaarsa xumuruun walharkaa fuudhiinsa gaggeessuuf ijaarsi bishaan Oromiiyaa xiyyeeffannoofi quuqmina addaan hojjechuu akka qabuu beeksiisaniiru.
Hojiiwwan boodatti haafaniifi haarkifatan irratti miira yeroo hinqabneen hojjatamuu akka qabuus ibssaanii Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Oromiyaatu gabaase.
Friday, 09 February 2018 23:37
Torban kana/This_Week 12392
Guyyaa mara/All_Days 1821812